Ankizy Malefaka 12 Taona Mampiseho Antsika Ny Fiainana ao Nepal Taorian’ny Horohorontany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2016 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Ελληνικά, русский, Español, नेपाली, 日本語, English
Shreesha Duwal manao raharaha tao amin'ny toby vonjimaika ao Bhaktapur izay nifindran'izy sy ny fianakaviany rehefa simba tamin'ny horohoron-tany 2015 tao Nepal ny tranony. Sary: Sonia Narang
Ity lahatsoratr'i Sonia Narang niseho voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 21 Aprily 2016 ity, dia navoaka eto ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Rehefa nandray ahy ho any an-tranon'ny fianakaviany ao Bhaktapur ivelan'ny Kathmandu i Duwal Shreesha, dia lavaka sy antontan-biriky fotsiny no teo. Nirodana nandritra ny horohoron-tany tamin'ny taona lasa ilay trano be nisy rihana maro .
“Nisy trano 20 teto, nirodana daholo izy 20,” hoy izy.
“Malahelo ny foko mijoro eto. Maharary ny mahita hoe lasa daholo koa ny tranon'olon-drehetra teto. “
Nilevina ao ambanin'ny korontam-bato ny boky sy akanjo, anisan'izany ny fanamiany an-tsekoly.
Ankehitriny izy mipetraka miaraka amin'ny reniny, ny rainy, ny anadahiny, ary ny dadabeny ao amin'ny trano kely vita amin'ny fanitso, ao amin'ny toby mampialoka fianakaviana 60 nafindra toerana .
Efa ho herintaona izay no lasa nisian'ilay horohorontany manana ny maridrefy 7,8 – nandrava tanàna sy vohitra maro manerana an'i Nepal, tamin'ny 25 Aprily 2015 ary nahafaty olona mihoatra ny 8.000 sy namela tsy manan-kialofana an'arivony maro. Fa mbola miandry fanarenana izay zara raha nanomboka ny maroanaka toy ny fianakaviana Duwal. Tsy mbola nankatò drafitra ho fanorenana indray ny trano akory aza ny governemanta Nepal .
Ao amin'ny tobin'i Shreesha, tsy misy ny rano, ary tsy maintsy mahandro any ivelany ry zareo, manao sakafo hariva ao amin'ny maizina amin'ny taratry ny hazavan'ny afo. Natao tamin'ny tafo fanitso miholakolana ny rindrina ary labasy no tafo. Mihantona amin'ny tariby akaikin'ny kitapo lehibe feno kofehy ny akanjo. Manjaitra fonon-tanana izy sy ny reniny ho fidiram-bola fanampiny.
Tia mivazivazy momba ny voalavo goavana izay mihazakazaka manodidina ny trano bongo i Shreesha. “Efa betsaka ny matinay,” hoy izy. “Fa na firy na firy no matinay, dia toa tahaka ny mitovy ihany ny habetsahan'ny voalavo.”
Tsy misy afa-bela amin'ny toetrandro ihany koa.
“Tena mafana eto,” hoy izy. “Nandritra ny rivo-doza, nitsoka ny vovoka anaty trano ny rivotra ary mahatonga ny zava-drehetra ato amin'ny efitrano kelinay ho maloto daholo. Rehefa avy ny orana, mitete ao anatiny ny rano. “
Amin'ny maha-ankizy azy, mahasorena azy ny hoe tsy mandeha tsara ny fahitalavitra .
” Ny antsasaky ny efijery ihany no mirehitra rehefa manandrana mijery TV izahay,” hoy izy. “Noho izany, toy ny tsy misy televiziona ihany izany.”
Mpianatra mamiratra, mahatoky mavitrika eo amin'ny kilasy fahavalo i Shreesha, nefa sarotra ho azy ny mianatra ao anatin'ny tabataban'ny fanamboarana tsy misy fitsaharana manerana ny arabe.
Rehefa any am-pianarana izy, manaraby azy noho izy tsy manan-kialofana ny ankizy hafa .
“Ianao ary tsy manan-trano ipetrahana akory,” hoy izy ireo. “Ahoana ny hipetrahanareo ao amin'ny efitra iray?”
Natao ho vonjimaika ihany ny tobin'ny olona nafindra toerana noho ny horohorontany, nefa miadam-piasa ny governemanta amin'ny famatsiam-bolan'ny fanarenana. Mahatsikaiky fa mpiasan'ny fanorenana ny rain'i Shreesha, izay mandany ny androny amin'ny fananganana ny tranon'ny hafa. Ary izay vola kely mba azo dia handoavany ny saram-pianaran'ny zanany.
“Mino aho fa mila mijanona eto mandritra ny fotoana ela izahay,” hoy i Shreesha.
Shreesha Duwal eo amin'ny toeran'ny tranony teo aloha ao Bhaktapur, Nepal Sary: Sonia Narang
Andro vitsy taorian'ny nihaonako tamin'i Shreesha dia niaraka tamin'ny fianakaviambeny aho hanatrika ny Taombaovao Nepali. Nandray ahy tao amin'ny efitra kely, maizina ao amin'ny rihana fahatelon'ny trano be tsy misy mipetraka intsony izy ireo eo akaikin'ny tranony taloha. Mihozongozona ilay izy ary mihovitra ny gorodona rehefa misy mandeha eo, nefa ry zareo efa tapa-kevitra ny hifety ivelan'ny toby.
Nisotro soda Mountain Dew izahay ary nihinana vary sy legioma. Toa mirana izy ireo, ary feno hehy ny sakafo. Avy eny am-baravarankely, tahaka ny faritra anaty ady voadaroka baomba ny manodidina azy ireo taloha.
Rehefa manontany an'i Shreesha aho hoe inona no mbola alehany any, dia mivantana ny valin-teniny.
“Izany manana ilay tena tranonay izany no nofinofiko, sy ny fananako ny efitranoko, izay no manome hery ahy,” hoy izy tamiko.
Taorian'ny sakafo Taombaovao, nitarika ahy tany amin'ny làlana manan-tantara miolikolika feno hafaliana manakaiky ny tranony teo taloha ry Shreesha, ny dadany, ary ny havany. Nanandrana ny “King Curd”, yaourt mamy sady matsiro, mampalaza an'i Bhaktapur izahay, ary nijanona teo amin'ny lanonan'ny tempoly mba hihaino mozika.
Toa tena sambatra i Shreesha tamin'izay fotoana izay.
Sonia Narang nitatitra avy any Nepal miaraka amin'ny fanohanan'ny Fikambanan'ny Mpanao gazety ao Azia Atsimo.